အဖွဲ့များ - ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺
အဖွဲ့များအားလုံးကိုယ့်အဖွဲ့များ ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ စာကြည့်တိုက်
နောက်ဆုံးလုပ်ဆောင်မှု= Feb 28 Like0members like this
1. ဝိပဿနာဖြင့်​ မရဏလမ်းကို ​ကျော်​ဖြတ်​ခြင်း
3. အရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ အတုယူစရာစိတ်ဓာတ်ကောင်း။
4. ဗုဒ္ဓဟောကြားသော မိတ်ကောင်းဆွေကောင်း အကဲဖြတ်နည်း။
5. ဝိရိယ၏ အရည်​​သွေ​လေးမျိုး
6. အ၀ိဇ္ဇာ၏ အဓိပ္ပါယ်။
7. ကောင်းကံက လွှမ်း။
8. ဆရာသမားကောင်း ရွေးချယ်နည်း။
9. ပဋိစ္စသမုပ္ပာဒ် ၁၂ ပါး။
11. ၀မ်းကြာတိုက်ထဲကပင် သရဏဂုံဆောက်တည်ခဲ့သူ။
12. “ သူယုတ်မာအင်္ဂါလေးပါး ”
14. ဒေါက်တာအရှင်နန္ဒမာလာဘိဝံသ ဟောကြားသော နတ်တွေပြောကြတဲ့ သူတော်ကောင်း။
15. မပေါင်းသင်းအပ်တဲ့ မိတ်ဆွေတု။
17. ဘုရားအလောင်းတော်ရဲ့ မိတ်ဆွေကောင်း။
18. တရားရလွယ် လိုက်နာဖွယ်။
19. ကိုးဘွဲ့ရဆရာတော်၏ " အသဲနာတယ် "။
20. ဗုဒ္ဓဟောကြားသော မိတ်ဆွေကောင်းများ။
Top News · Everything thein wai သည် ဘလော့တင်သွားပါသည်။ထိုသူပညာရှိ။တဏှာမဖြစ်အောင်။၀မ်းကြာတိုက်ထဲကပင် သရဏဂုံဆောက်တည်ခဲ့သူ။34 more…Jun 2ညီထွေး သည်အရှင်ဝိမလဝံသ's ၏ '“သတိထားဆင်ခြင်ဖွယ် မပေးလှူကောင်းသော အလှူ(၁၀)မျိုး”' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။မေ 28ညီထွေး သည်Thet Thet Aung's ၏ 'အချိန်၃မိနစ်ပေးဖတ်ပါ' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။မေ 28နှင်းဖြူ သည်ဦးထွန်းလင်းဦး's ၏ 'ဝိပဿနာဖြင့်​ မရဏလမ်းကို ​ကျော်​ဖြတ်​ခြင်း' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။မေ 27နှင်းဖြူ သည်သူရ​အောင်​'s ၏ 'ဝိရိယ၏ အရည်​​သွေ​လေးမျိုး' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။မေ 27နှင်းဖြူ သည်သူရ​အောင်​'s ၏ 'ဝိရိယ၏ အရည်​​သွေ​လေးမျိုး' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။မေ 27နှင်းဖြူ သည်phyuthi's ၏ 'ဗုဒ္ဓကမ္ဘာသာသနာဟိအသင်း (၁၇) ကြိမ်မြောက်အလှူပွဲ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@ အတွက် အသိပေးနိုးဆော်ခြင်း @@@@@@@@@@@' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။မေ 27OHNMAR သည် Thein Naing Ohn's၏ '၀ိဝေကသုံးပါး နှင့် ပပဉ္စတရား'ဘလော့ တွင်မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။"ကျေးဇူးပါနော်"မေ 22အရှင်ပညာသိရီ သည်သူရ​အောင်​'s ၏ 'ဝိရိယ၏ အရည်​​သွေ​လေးမျိုး' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။မေ 4အရှင်ပညာသိရီ သည်Thet Thet Aung's ၏ 'အချိန်၃မိနစ်ပေးဖတ်ပါ' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။မေ 4အရှင်ပညာသိရီ သည်profileကိုပြုပြင်သွားသည်။မေ 4kyaw wunna tun and Daw Yee Yee Swe joined ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺Apr 29 More... RSS
© 2017 Created by A BuddhismworldAdmin. Powered by Badges | Report an Issue | Terms of Service